Geele: “Al-Shabaab Dhamaadkoodi Ayey Joogaan” • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Geele: “Al-Shabaab Dhamaadkoodi Ayey Joogaan”
Geele: “Al-Shabaab Dhamaadkoodi Ayey Joogaan”
February 24, 2015 - By: Mohamed Dacar
Madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka hadlay hanjabaad dhawaan ka soo baxday Ururka Al-shabaab oo ku aadanayd weeraro in ay ku qaadayaan goobaha ganacsi ee dowladdaha reer galbeedka meel kast ay ku yaalaan.
Geele oo waraysi siiyey idaacada VOA laanteeda Afka Soomaaliga ayaa sheegay in Ururka Al-shabaab Hanjabaadooda ay tahay mid aan waxba ka jirin oo aan dhaafsiisnayn afka oo kaliya wuxuuna sheegay in aysan awood lahayn ay ku weeraraan dalalka Reer Galbeedka.
Wuxuu sheegay in Ururka Al-shabaab ay marayaan gabo gabo oo aysan jirin awood u hartay oo ay ku qaadikaraan dagaal isagoo tilmaamay weerarada ay qaadayaan in ay tahay mid iska dhacda balse cadayn u ah taagdarida Al-shabaab.
Ka hortagida weerarada ay ku goodiyeen Ururka Al-shabaab ayuu madaxweynaha Jabuutu sheegay in dhankooda ay xoojiyeen amniga Xuduudaha gaar ahaa mid ay la wadaagaan maamulka Soomaaliland oo maalmo ka hor la xiray, wuxuuna sheegay in aysan xirin balse ay tahay baaritaan in lagu sameeyo gaadiidka iyo dadka galaya Jabuuti.
Horaantii todobaadkan Ururka Al-shabaab ayaa soo saaray Muuqaal ku dhex sheegeen in ay weeraro ku qaadi doonaan goobo ganacsi oo ku yaalada dalalka Reer Galbeedka iyagoo sidoo kale sheegay in ay weeraro ku qaadayaan danaha dalalkaas.
Maxamed Cabdulqaadir Dacar